Sidee loo sameeyaa gacmo-biyoodyo? | Saadaasha Shabakadda
Weligaa ma aragtay tuubooyin biyo ah? Kuwani "funnels" ka soo baxaya daruur Cumulonimbus ah la yaabi kartaa in ka badan hal iyo in ka badan laba haddii ay u sameysmo marka ay badda marayaan.
Laakiin miyaad ogtahay sida ay u samaysan yihiin? Waan kuu sheegi doonaa.
1 Noocyada tuubbooyinka biyaha
2 Xagee ku samaysan yihiin?
3 Burburka tuubbooyinka ay sababi karaan
Noocyada tuubbooyinka biyaha
Biyo-mareennada, ama biyo-mareennada sida loo yaqaanna, waxay noqon karaan laba nooc oo kala duwan: toorreey ama non-tornadic.
Tornadic: sida magacooda ka muuqata, waa duufaanno biyaha saaran. Si ay u muuqdaan, waxaa lagama maarmaan u ah duufaan koronto oo aad u daran oo ay sababtay supercell inuu sameeyo. Iyagu waa dhacdooyin naadir ah oo saadaasha hawada ah, maaddaama ay duufaannadu inta badan ka soo baxaan dhulka, maaddaama kala duwanaanshaha cufnaanta hawadu ay aad u badan tahay. Weli, iyadoo aan loo eegin meesha ay ka muuqdaan, waa inaad aad uga taxaddartaa, maadaama ay dabayshu u soo dhici karto 512km / h.
Non-tornadic: waxay badanaa ka sameysan yihiin saldhiga Cumulus ama Cumulonimbus. Uma hanjabaan sida duufaannada, laakiin wali waa inaad ka fogaataa, maadaama dabayshu qaadi karto 116km / h.
Xagee ku samaysan yihiin?
Biyo-mareenka Galicia. Sawir - Twitter: @ lixo1956
Biyo-baxayaasha ayaa aad ugu badan aagagga kulaylahasida xeebta koonfur-bari ee Mareykanka. Waxay sidoo kale ka muuqdaan koonfurta Florida iyo Furayaasha. Iyo, haa, waxaa lagu arki karaa cimilo dhexdhexaad ah, in kastoo aysan badnayn. Kii ugu dambeeyay wuxuu ka soo muuqday bishii Abriil 13, 2016, Galicia (Spain), halkaas oo mid ka mid ah uu ku soo degay xeebta Cabío, A Pobra do Caramiñal, wuxuuna sababay bur bur baaxad leh.
Burburka tuubbooyinka ay sababi karaan
Dhacdooyinkaani waxay sababi karaan dhaawac weyn. Waxay saameyn ku yeelan karaan doomaha, doonyaha, iyo sidoo kale dadka ku sugan xeebta. Sidaa darteed, xitaa haddii aad ku nooshahay aag aan iyagu badnayn, haddii duufaan soo socoto, waxaa fiican inaadan u dhowaan xeebta, haddiiba ay dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee loo sameeyaa gacmo-biyoodyo?
Rajo Perez dijo
faafaahin wanaagsan, waad keydisay howshaydii, aad ayaad u mahadsantahay laakiin waxay ka maqnayd wax yar oo macluumaad ah oo ku saabsan waxyeelada ama cawaaqibta, laakiin si kastaba waad ku mahadsan tahay
Jawaab Esperanza Perez